राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको उपलब्धी के ? यस्तो छ विज्ञको राय – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको उपलब्धी के ? यस्तो छ विज्ञको राय
डिल्लीरमण सुवेदी र रमेश हतुवाली, काठमाडौँ, २० वैशाख, २०७६ । वैशाख ११ गते चीन प्रस्थान गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १८ गते स्वदेश फर्किएकी छिन् । चीनमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई उच्च सम्मान दिइएको छ । नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेको चीनले राष्ट्रपतिलाई बोलाएर भव्य स्वागत गर्नु सकारात्मक संकेत हो । भ्रमणको क्रममा भएका समझदारी र सहमतिले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
विआरआईको दोस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहवरमा नेपाल–चीन यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रोटोकल लगायत ७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । योसँगै अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीको २०७२ चैतमा गरेको चीन भ्रमणको क्रममा भएको पारवहन समझदारीले मूर्त रुप लिएको छ । औपचारिक रुपमा नेपालको समुद्रसँगको सम्पर्क एकतर्फ भारतमा मात्रै रहँदै आएकोमा चीन तर्फबाट पनि समुद्रसम्म पहुँच कायम भएको छ । अब नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ भने बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि छिटो र उपयुक्त रुट प्रयोग गर्न दिन पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । यसले नेपालको व्यापार, आयात र निर्यातमा सहजता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान र ती देशको नजिकका देशबाट सामान ल्याउँदा नेपाललाई सहज हुनेछ ।
यसैगरी चीनले नेपाललाई १ अर्ब चिनिया युआन सहयोग प्रदान गर्ने पनि बताएको छ । यता नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि आपसी सहयोग बढाउने, दुई देशबीचको भन्सार व्यवस्थामा आपसी सहयोग गर्ने, नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशसनबीच आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसले नेपाललाई ठूलो फाइदा पुग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण ऐतिहासिक, निकै सफल र फलदायी तथा सार्थक भयो । नेपालले ‘ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी र रेल–वे कनेक्टिभिटीलाई बिआरआई परियोजनामा जोड्नुपर्छ’ भन्दै गरेको प्रस्ताव बिआरआईको परियोजनासँग जोडिनुले नेपाल व्यावहारिक र व्यापारिक हिसाबले पनि चीनसँग नजिक भएको छ । बिआरआईमा पारित यो प्रस्तावले नेपाललाई एकतर्फी पारवहनमा भरपर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गराउनेमा नेपाल पक्षले विश्वास लिएको छ । नेपालले दक्षिणसँग मात्रै भर परिरहेका कारण नाकाबन्दीमा जुन समस्या भोग्यो, त्यसले हामीलाई कुनै न कुनै विकल्पमा जानैपर्ने थियो, त्यो परिस्थितिलाई चिर्न यसले धेरै ठूलो महत्व राख्छ ।
सांसद, पूर्वअर्थमन्त्री एवम् केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका बहुपक्षीय छलफलमा नेपाली सरोकारका विषय समेटिएका छन् । त्यसले आगामी दिनमा नेपालका विकास कार्य अझै अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विआरआईमा नेपाल जोडिन पाउनु आफैँमा नेपालका लागि उपयुक्त हो । अझ चीनका राष्ट्रपतिले नै नेपाललाई सहभागि बनाउन पाउँदा खुसी लागेको छ भनेकाले यसको महत्त्व अझै बढेर गएको मैले देखेको छु । सुधारका क्षेत्रमा नयाँ परिदृश्य खोल्ने बिआरआईको उद्देश्य रहेको चिनिया राष्ट्रपति सीको जिकिरले नेपालको सहभागितालाई पनि महत्वका साथ हेरेको देखिन्छ । प्रस्तावक चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने बाटोका लागि नेपालको सहभागिता अर्थपूर्ण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
स्थायी समिति सदस्य, नेकपा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले बहुप्रतिक्षित पारवहन प्रोटोकल, दुई देशबीच आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सहमति, नेपालको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेसम्बन्धी माइन्युट र चिनियाँ अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनामा सम्बन्धी प्रमाणपत्र दुई देशबीच आदान प्रदान भएको छ । यसले नेपाल र चीनबीच थप सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै भन्सार सुधारका लागि द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र चीनको गुणस्तर विभागको स्तरसम्बन्धी सम्झदारीमा समेत सहभागी भएको छ । यी सहमति हुनुको अर्थ हो अब नेपाल दक्षिणमा मात्रै निर्भर छैन उत्तरमा पनि सहभागिता, सम्बन्ध र सहकार्य गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी सबैसँग समन्जस्यता कायम गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेका थियौ, अहिलेको भ्रमणले हाम्रो योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको अनुभूति मैले गरेको छु ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एवम् सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
विकासशील राष्ट्रहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र चीनको खुलापन तथा सुधारका क्षेत्रमा नयाँ परिदृश्य खोल्ने बिआरआईको उद्देश्यमा नेपाल सहभागी हुन पाउनु नेपालजस्तो विकासशील हुन खोजिरहेको मुलुकका लागि अवसर हो । दुई मुलुकबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा उठाइएका विषय, त्यसमा भएका छलफल, सहमति र सम्झौताले अझै मजबुत बनाएको छ । नेपालका दुई प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गर्नु भनेको नेपालले विआरआईमा बलियो उपस्थिति देखाउन सुरु गर्यो भन्नु हो । विआरआइमा सहभागिताका लागि मैले गरेको सुरुवातले अब परिपक्वता कायम गरेको मैले बुझेको छु ।
नेपालले वेल्ट एण्ड रोडको दोस्रो सम्मेलनमा आफ्नो प्रतिबद्धता र समर्थन पुनः प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल कुनै एउटा देशको पोल्टोमा बस्ने भुटानजस्तो मुलुक होइन र सबै मुलुकसँग नेपालले सहकार्य गर्नसक्छ भन्ने परिचय यस सम्मेलनमा नेपालले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा सम्पन्न भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो त्यो राष्ट्रपतिज्यूको यसपटकको भ्रमणमा सम्पन्न भएको छ । अब नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने डर भएन । अब नेपाल लेण्डलक कन्ट्रीबाट लेण्डलिङ्कड कन्ट्री भएको छ । यो सम्झौताबाट दुबै मुलुकलाई बराबरी फाइदा पुग्छ । साथै नेपालको उत्तरी क्षेत्रको विकास गर्दा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आगामी दिनमा नेपालको कच्चा पदार्थलाई चीनको पूँजी र प्रविधिको मिश्रण गरी चीनमै पठाउने अनि गतिशील र सन्तुलित व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अनुकूल समय आएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणालाई चिनिया राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले स्वीकारेका छन् । नेपाली जनता चिनिया राष्ट्राध्यक्षलाई स्वागत गर्न आतुर छन् तर चिनिया राष्ट्राध्यक्ष नेपालमा कसैको मुख हेर्न र भोज खान मात्रै नआउने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । हाम्रा एजेण्डाहरु कत्तिको चीनकालागि महत्वपूर्ण छन् ? सो हेरेर नै चिनिया राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आउने हुनसक्छ । यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने चीनका राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमणको समयमा उनको सुरक्षा दिन सक्षम छ कि छैन त्यो बुझ्न जरुरी छ । चीनका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री वन च्यापाओ सन् २०११ मा नेपाल आउँदा ४ घण्टा मात्र बसेका थिए । यसले के संकेत गरेको छ भने, नेपालले चिनिया नेतालाई ४ घण्टामात्र सुरक्षा दिनसक्छ । चिनिया नेताको भ्रमणका समयमा दक्षिण तिरको सीमाना बन्द नगर्ने र उताबाट चीन विरोधीहरु नेपाल आउने हो भने भ्रमण हुन सक्दैन त्यसैले नेपालले चीनको सुरक्षा, चासोलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
चिफ न्यूज इडिटर, रेडियो नेपाल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो भ्रमण नेपाल चीन मैत्रीका लागि दुरगामी प्रभाव पार्ने भ्रमण हो । चिनिया राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले सन् २०१३ मा ल्याउनु भएको वेल्ट एण्ड रोड अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना हो । यो फोरमलाई प्रयोग गर्दै नेपालले चीनबाट विभिन्न खालका फाइदाहरु लिन सक्ने देखिन्छ । यस भ्रमणमा सम्पन्न यातायात तथा पारवहन सम्झौताले भारतसँगको एकल सामुद्रिक निर्भरताको अन्त्य गर्दै चीनसँगको ढोका खुलेको छ । त्यसले चीनसँगको नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा मद्दत मिल्नेछ ।
नेपालका राष्ट्रपतिको यस भ्रमणलाई चीनले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जुन हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक छ । राष्ट्रपतिज्यूले चिनिया राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणकालागि दिनु भएको निमन्त्रणाको पनि विशेष अर्थ छ । र भविष्यमा चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर नेपालको आर्थिक विकासकालागि चीन सरकारले यस पटक १ अर्ब आरएमबी सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यो पनि यस भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ । साथै यस भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अरु प्रगाढ बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका समयमा सम्पन्न भएका सम्झौताहरुको हस्ताक्षर तथा तिनको कार्यान्वयनबाट नेपालले चीनका बन्दरगाहहरु सहजरुपमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । यसले नेपाल–चीनबीचको ब्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, भारतको सामुद्रिक बन्दरगाह मात्रै प्रयोग गर्दै आएको नेपालकालागि अब अर्को मौका प्राप्त भएको छ । र भारतमाथिको एक पक्षिय निर्भरता हटेको छ । यो चीनले नेपाललाई दिएको महत्वपूर्ण अवसर हो । तर यो सम्झौता तथा हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ त्यो हेर्नुपर्ने विषय हो । सन्धी सम्झौता हुने र त्यसको प्रचार प्रसार पनि हुने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रपतिज्यूको यसपटकको चीन भ्रमणको शिलशिलामा नेपाल र चीनबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौता सकारात्मक छ । र नेपालकालागि यो खुसीको कुरा हो । विगतमा दक्षिण छिमेकी भारतबाट मात्र आयात–निर्यातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अब यो सम्झौता पश्चात उत्तरी छिमेकी चीनसँग समेत ब्यापार गर्न सहज भएको छ । यो सुवर्ण मौका हो । हामी व्यवसायीहरुलाई व्यापार विस्तारका लागि यस सम्झौताले फाइदा पुग्ने मेरो विश्वास छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-05-03 2019-05-05 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged उपलब्धी राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण विज्ञ
चक्रवात ‘फानी’ नेपाल आइनपुग्ने, तर नेपालमा हावाहुरीसहित वर्षा
बिजुलीको उज्यालोसँगै स्थानीय बासिन्दा हर्षित
Tags: उपलब्धी, राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण, विज्ञ